सौराहाका होटल खुलेसँगै चहलपहल शुरु - Nepal Samaj
१६ साउन, २०७७नेपाल समाजअर्थ
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य प्रवेशद्वार सौराहाका होटल बिहीबारबाट खुलेसँगै चहलपहल शुरु भएको छ । होटलमा पर्यटक आउन शुरु गरेका छन् भने रेष्टुरेण्टमा ग्राहक देखिन थालेका छन् ।
जङ्गल वाइल्डलाइफ क्याम्पका सञ्चालक नारायण भट्टरार्ईले होटल खुलेकै दिन दुई विदेशी पर्यटक आएको बताए । होटलको सरसफाइ, मर्मत सम्भारसँगै च्च सावधानीका साथ पाहुनाको स्वागतमा व्यवसायी जुटेको क्षेत्रीय होटल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रहेका भट्टरार्ईले जानकारी दिए ।
क्रमशः पर्यटक बढ्दै गएपछि कर्मचारी थप गर्दै लैजाने तयारी गरिएको छ । सौराहामा होटलमा प्रत्यक्षरूपमा ५ हजार ५०० भन्दा बढी कामदारले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । लकडाउनसँगै अधिकांश कामदारलाई होटलले छुट्टी दिएका थिए । होटल तथा रेष्टुरेण्ट खुलेसँगै व्यवसायीले आफ्ना कामदारलाई बोलाएर नियमित काममा लगाउन थालेका हुन् । सरकारले यही साउन १५ गतेदेखि देशभरका होटल तथा रेष्टुरेण्ट विशेष सावधानी अपनाएर खोल्ने निर्णय गरेसँगै सौराहाका होटल खुलेका हुन् । होटलले कोभिड–१९ बाट बच्न आवश्यक सूचना टाँस गर्ने, पर्यटकको ज्वरो जाँच, हात धुने र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
सौराहा आउने पर्यटक हात्ती चढेर स्थानीय सामुदायिक वनमा रमाउने, राप्ती नदीमा डुङ्गा चढ्ने, जङ्गलमा पैदल यात्रा गर्ने गर्दछन् । सबै गतिविधिका लागि विदेशी पर्यटकले निकुञ्जको प्रवेश टिकट लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निकुञ्जले औपचारिकरूपमा अनुमति दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले कोरोनाको सङ्क्रमण जारी नै रहेकाले अध्ययन र छलफल गरेर मात्र निकुञ्जले अनुमति दिने बताए । उनले भने, “रोगको सङ्क्रमणको डर वन्यजन्तुलाई पनि हुन सक्छ ।”
सौराहा आउने पर्यटकलाई हात्ती चढाएर स्थानीय कुमरोज, बाघमारा, चित्रसेन र खोरसोर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घुमाउन लगिन्छ । सामुदायिक वनमा घुमे पनि आन्तरिक पर्यटकले प्रति व्यक्ति रु. १००, भारतीयले रु. १ हजार ६०० र अन्य देशकाले रु. २ हजार निकुञ्जलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । वन र वन्यजन्तुसँग रमाउनका लागि पर्यटक सौराहा आउने गर्दछन् ।
महामारीमा फस्टायाे मोटरसाइकल व्यापारः ६० प्रतिशतले आयात बढ्यो
प्रतिगमनविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनको औचित्य छः बाबुराम भट्टराई
नैकापबाट हेर्दा यस्तो देखियो उपत्यका